Eder Ferreño | | Egwuregwu gam akporo, Nkuzi
Nhọrọ nke egwuregwu dị na Storelọ Ahịa Play dị ukwuu ma na-eto eto. Ya mere, ụdị ọhụụ na-abịakwa maka ndị ọrụ nwere ngwaọrụ gam akporo. Gendị nke nọnyeere anyị ogologo oge ma kwụsị ịkwụsị inweta ewu ewu bụ egwuregwu ịgbapụ ma ọ bụ ịgba égbè. Ọ bụ ụdị egwuregwu nke mere nke ọma na njikwa na kọmputa ma na-abịa gam akporo.
Nhọrọ nke ụdị egwuregwu ndị a sara mbara nke ukwuu. Yabụ n'ezie maka ndị na-akwado ụdị a nwere aha ndị nwere ike ịmasị. Mgbe ahụ, anyị hapụrụ gị nhọrọ nke egwuregwu kachasị mma nke ụdị a dị na gam akporo.
Nhọrọ dịgasị iche iche nke nwere egwuregwu ụfọdụ ị maara nke ọma ma ọ bụ na ị nwere. Mana ha maara otu esi achịkọta ụdị ndị agbapụ ugbu a na Storelọ Ahịa Play. Kedu egwuregwu ndị edepụtara?
1 Nwụrụ anwụ ịkpalite 2
3 Oge a na mbuso 5: blackout
4 Sinipa 3D ogbu
Nwụrụ anwụ ịkpalite 2
Ọ bụrụ na ịchọrọ egwuregwu egwuregwu na egwuregwu zombie, nhọrọ a dị mma. Ebe ọ bụ na n'egwuregwu a ka ụwa abụọ gbakọtara iji mepụta aha a. N'ụzọ bụ isi, anyị ga-agbapụ zombies niile na-abịara anyị. Ihe na-eme bụ na anyị anaghị ama mgbe niile ebe onye ọzọ ga-apụta. Ya mere, anyị aghaghi ịmụrụ anya ma nke a na-enye anyị ọtụtụ adrenalin. Na mgbakwunye, ekwesiri ighota na egwuregwu a nwere ufodu eserese dị egwu.
La nbudata egwuregwu a maka gam akporo bụ n'efu. Ọ bụ ezie na anyị na-ahụ ịzụrụ na mgbasa ozi n'ime ya.
Egwuregwu Zombie nwụrụ anwụ onye nchọnchọ 2
Developer: Egwuregwu MADFINGER
Na nke abụọ anyị na-eche ihu egwuregwu nwere nyocha dị mma ma merie ọtụtụ onyinye. Ya mere nnabata ya n'ahịa enweghị ike ịka mma. Karịsịa, anyị ga-egosipụta nnukwu eserese ndị egwuregwu ahụ nwere, ebe ọ bụ ihe kachasị mma anyị nwere ike ịchọta na nke a. Ọ na-amasị m ka ha si egosi ihe niile n'ụzọ zuru oke, site na ntụgharị anyanwụ ruo na mgbawa. Ndị a bụ nkọwa na-enyere egwuregwu na-akpata ihe na akụkọ bụ ọzọ ufiop. Na nke a, zombies bụghachiri ndị protagonists, yabụ ọrụ anyị bụ igbu ha niile.
Ịlanahụ Zombie na -enweghị atụ
Oge a na mbuso 5: blackout
Na ọnọdụ nke atọ anyị na-eche ihu ihe ntinye ohuru nke otu sagas kacha ewu ewu Site na ahịa. Nke a bụ egwuregwu na-ada ụda nke ọtụtụ n'ime gị maara nke ọma. Anyị gafere ụwa ebe ọgba aghara na ọgba aghara na-achị ihe niile na-eme. Ya mere oru anyi bu ime ka udo di ozo. Nke a bụ ihe anyị ga-arụzu site na usoro ọrụ ọzọ. Ihe isi ike ga-abawanye ka anyị na-enwe ọganihu site na egwuregwu ahụ. Ọ nwere ezigbo egwuregwu na nnukwu eserese. Na-edowe ọkwa nke saga.
Nbudata egwuregwu a maka gam akporo n'efu. Ọ bụ ezie na dị ka egwuregwu ndị gara aga, enwere ịzụrụ na mgbasa ozi n'ime ya.
Oge a ọgụ 5: mobile fps
Sinipa 3D ogbu
Anyị ghọrọ onye mgbaasị na egwuregwu nke anọ na ndepụta a. Ya mere, anyi aghaghi idi nkpa dika o kwere mee iji gbue ndi mmadu anyi aghaghi iwepu. Anyị ga-alụso mpụ ọgụ na aha a kpachapụrụ anya na ezigbo eserese. E gosipụtara akụkọ ahụ nke ọma na egwuregwu nwere ezi playability. Ihe na-enyere aka nke ukwuu. Anyị ga-emezue ọrụ dị iche iche iji nwee ike igbu ndị omekome a. Ihe isi ike nke ndị ozi a na-abawanye ka anyị na-aga n’ihu. Yabụ na ọkwa ụfọdụ ọ nwere ike ịbụ aghụghọ.
Nbudata egwuregwu a maka gam akporo n'efu. Ọ bụ ezie na anyị na-ahụ ịzụrụ na mgbasa ozi n'ime ya.
Sniper 3D: Egwuregwu agbapụ
Developer: Egwuregwu Egwuregwu Maka n'efu
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Egwuregwu egwuregwu kacha mma maka gam akporo
Xiaomi ga-ebido smartphone na Android Go ọnwa a